19 Zviratidzo Zvisingarambike Unoda Shanduko Muhupenyu - Blog
19 Zviratidzo Zvisingarambike Unoda Shanduko Muhupenyu
Tese tichava tasangana nenguva apo patinoshamisika, ndiri kuitei nehupenyu hwangu?
Pakarepo, iko kuziva kunorova kuti iwe unofanirwa kuita shanduko zvinhu zvisati zvatanga kudzikira.
Kuziva kuti inguva yekuchinja ndiyo kiyi kune kudzorera hupenyu hwako munzira uye kuita sarudzo dzakanaka nezveramangwana rako.
Verenga pane zvimwe zvezviratidzo zvakajairika kuti inguva yawatora mukana ukaita shanduko.
1. Une godo.
Kana iwe uine godo nemumwe munhu waunoziva uye uchinzwa kunge hupenyu husina kurongeka, saka chinhu chakanakisa kuita kutamisa tarisiro yako kuhupenyu hwako uye kuita shanduko.
Hupenyu ndozvaunozvigadzira uye kuita godo pane izvo vamwe havana kwazvinokusvitsa kupi.
Tarisa simba rako pauri pane kuenzanisa nevamwe. Iyo miniti iwe yaunotanga kuisa mari mukati mako uye kurega kurarama zvinoshamisira kuburikidza nemumwe munhu ndiyo miniti iwe yaunotanga kuona zvinhu zvichichinja kuita zvirinani.
2. Hausi kurara.
Iwe unorara wakamuka husiku uye pfungwa dzako dziri mukunyanyisa. Kushushikana kwako kunowana zvirinani kwauri zvekuti haugone kurara kana ivo vanotanga kupinza zviroto zvako.
Iwe haugone kushanda pa100% kana iwe wakaneta, saka kuwana wenguva dzose kurara kwakanaka usiku kunofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvako zvepamusoro zvekutanga.
Edza kushandura tsika dzako dzekurara, kuchinjisa skrini usati warara kubhuku, kana kuenda kune kumwe kufungisisa kuti ubatsire kuramba uchikurisa pfungwa.
3. Huremu hwako hwachinja.
Kufutisa kana kushomeka, zvese zviri chiratidzo chekuti iwe unofanirwa kuita shanduko pahutano hwako.
Iwe unogona kunzwa kushushikana nebasa kana hukama hwako uye warega kutarisa pane izvo zvauri kudya kana kuwana yakakwana kurovedza muviri.
Kuzvisimbisa iwe pachako uye kukonzeresa shanduko dzakakomba pahuremu hwako kunogona kutanga kwehuwandu hwakawanda hwezvinetso zvakakomba mune ramangwana.
Izvo zvakanyanya kuipa kudya kwako uye maitiro ekurovedza muviri anova, asingafadzi iwe uchanzwa zvose mupfungwa nepanyama.
Ita nguva yekutarisisa hutano hwako uye isa pekutanga hupenyu hwako kupfuura zvimwe zvese.
4. Une mavara.
Nyaya dzine ganda rako chiratidzo chekuudza kuti chimwe chinhu chakadzimwa.
Kurara, kudya, uye kushushikana kunogona kuita chakakura pakuonekwa kweganda redu, saka kana iwe ukave nekukurumidza kubuda, funga nezve dzimwe tsika dzaungangoda kuchinja.
ari pamusoro pemukadzi wake wekare
Kana iwe uri kutarisa wakaneta uye wakaneta, pamwe nekuti uri. Saka tanga kutora nguva yekuzvitarisira, funga nezve chii chiri kukutadzisa kurara zvakakwana, kunetseka iwe, kana kukukonzera kunetseka.
5. Uri kudzivisa shamwari dzako.
Ishamwari dzedu dzepedyo dzinotiziva zvakanakisa uye dzinogona kutaura kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka, kunyangwe patinonyepedzera neimwe nzira.
Kana iwe uchinzwa pachako uchikwevera kure neshamwari dzako, kudzima zvirongwa, kana kudzivisa mafoni avo, zvinowanzoitika nekuti uri kuyedza kuvanzira chimwe chinhu kwavari.
Kuzvitsaura pachako haimbove mhinduro kana iwe uchinzwa wakaderera. Shamwari dzako dziripo kuti dzikutsigire uye kukusimudza, saka sangana navo uye taura nezvezvinhu zvaunazvo mupfungwa dzako.
Ivo ndivo vanhu vanogona kukubatsira iwe kuita shanduko dzakanaka uye kukudzosera munzira.
6. Unenge uri kuzviparadza.
Wanga uchinwa zvakanyanya, watanga kusvuta zvakare, urikutandara neshamwari dzako dzaunoziva kuti hadzina kukunakira.
Chero zvaunenge uchiita, iwe unoziva kuti uri kuzviisa iwe mumamiriro ezvinhu akashata uye zvinoda kumira.
Iwe ungangoda kurova pasi pasi usati watenda kukosha kwekuita shanduko muhupenyu hwako. Kana iwe uchikudziridza tsika iwe uchiziva kuti hadzina kukunakira uye hausisiri kufunga nezvemhedzisiro, saka iwe uripo panzvimbo shanduko dzinoda kuitwa.
Kazhinji uri kuita zvinhu izvi nekuti uri kutiza mutoro kana kukuvadzwa kwechimwe chinhu. Usarega aya manzwiro asina kunaka achitonga hupenyu hwako, tora kudzora uye utange kuita sarudzo dzakanaka kuti dzive nani.
7. Unonzwa kutya.
Kutya chimwe chinhu chiratidzo chiri pachena kwazvo chekuti shanduko inofanira kuitika.
Unogona kuvenga basa kana kuve wega, semuenzaniso.
Chero chii zvacho chausingakwanise kutakura, chiite chinzvimbo chekutanga kutsvaga nzira yekushandura iyi kunzwa kuita chimwe chinhu chakanaka. Iwe unofanirwa kunzwa mufaro, kufara, uye kutarisira zuva rako.
Kana iwe uchityisa chimwe chinhu, saka tora mukana wekuita shanduko iwe yawave uchiisa, kungave kuri kutsvaga basa nyowani kana kuita hurukuro yakaoma nemumwe munhu.
Iwe unoziva iwe uchanzwa zvirinani pazviri.
8. Iwe uri mukutambudzika kwepfungwa.
Zviri nyore kuti unamate mune yehumwe yezuva nezuva sezvo hupenyu hunoputika muzvikamu zvekugadzwa, kuenda, uye mabasa epamba.
Kana iwe usingakwanise kuyeuka kekupedzisira iwe pawakanyatso kuseka kana kunyara nemufaro pamusoro pechimwe chinhu, chiyeuchidzo chakakodzera nguva chekuti iwe warasika muhushe hwezvinhu.
Usabatwe zvakanyanya nekungopfuura nezuva zvekuti unokanganwa kurarama. Chero zvaunenge uchienda, panofanirwa kugara paine nguva yako uye nemanzwiro aunoita. Ruzivo rwako rwehupenyu nderwega saka usarasikirwe nemukana wekushandisa zvakanyanya.
9. Wakamira kutora kufarira.
Paunotarisa mugirazi uye usingakwanise kuziva munhu akakutarisa kumashure, chiratidzo chekuti warasa kufarira iwe pachako.
Kunyangwe iwe usingaone chikonzero chekupfeka chero chinhu kunze kwejuzi kana kushambidza bvudzi rako, kunzwa zvakanaka nezvako kunobatsira iwe kuva nechivimbo chekutora chero hupenyu hunokanda kwauri.
Inguva yekudzorera mojo yako uye wotanga kuzvibata iwe kune zvaunokodzera.
10. Uri kutadza kufambidzana nevanhu.
Isu tinowanzoburitsa manzwiro edu kune vanhu vepedyo nesu, uye kana ukazviona iwe uchidonha neavo vakakukomberedza, chiratidzo chekuti unoda shanduko muhupenyu hwako.
Kunyangwe ichizonzwa sekudaro, nyika haisi kugara ichipesana newe. Ingangove kushungurudzika kwemukati kuri kukuita kuti utsamwe kana kutsamwira vamwe.
Kana iwe ukaona kuti uri kuita zvakasiyana kune vanhu vakakukomberedza, tarisa mukati kutanga usati watanga kupomera vamwe pamusoro pechimwe chinhu iwe chete chaunogona kugadzirisa.
11. Wakarasa kurudziro.
Kana iwe usina chikonzero chekumuka ukaenda nezve rako zuva, shanduko kune zvakajairwa ndizvo zvaungoda kuzunza kunze kwemufaro wako.
Zvakanaka kuti uve nezuva rekubuda kamwechete mune imwe nguva. Zvipe iwe imwe nguva yekunzwa izvo zvaunoda kuti unzwe uye ita chirongwa chekuzvisimudza kubva kunze kwerima.
Kurasikirwa kwekurudziro kunogona chete kuve muviri wako nepfungwa kukuudza kuti inoda imwe nguva yekumutsiridza. Tora mukana wekunyarara uye funga nezvenzira dzekuchinja maitiro ako uye kutangazve.
12. Uri kutonyanya kugadzikana.
Kana zuva rega rega rakafanana uye wave kusagutsikana, edza kungoerekana waita uye tsvaga nzira dzekubuda kunze kwenzvimbo yako yekunyaradza.
Iwe haugone kukura semunhu kana usina zvitsva zvezviitiko. Kune nyika yese yezvinhu yekudzidza uye vanhu kusangana kunze uko.
Zvipikise pachako kutarisana nemamiriro ezvinhu matsva uye ona kuti hupenyu hungakusvitse kupi.
13. Unonyanya kuvimba nevamwe.
Sezvo vamwe vanhu vachifumisa hupenyu hwedu, haufanire kuvimba nemumwe munhu kuti akufambisire hupenyu hwako.
Hazvina kunaka kuisa kumanikidza kwekuita kuti hukama hushande kana kuita kwako sarudzo kune mumwe munhu.
Kutanga kutora mutoro wesarudzo dzako nezviito. Uhwu ndihwo hupenyu hwako, saka usamirira ukatenderedza pane mumwe munhu usati waita shanduko dzaunoda kuti dziitike.
14. Uri kuita zvikonzero.
Shanduko inogona kutyisa. Iwe hauzive izvo zvinorara kune rimwe divi resarudzo iwe yauri kuda kutora uye kuti ichave iri nani kana yakaipa.
Kuverengera uye kupa zvikonzero kungopa mukutya kwezvisingazivikanwe. Iwe hauzombofi wakasvika chero iwe ukasa tora kusvetuka kwekutenda.
Zvibate pachako paunotanga kupa zvikonzero nei usingafanire kuita shanduko uye panzvimbo pezvo tanga kufunga nezvese zvikonzero nei uchifanira.
Kumwe kwekuzvitenda-wega kunogona kuve zvese zvakamira munzira yako uye nezvawagara uchida.
15. Unonzwa kubatwa muhukama hwako.
Icho chiratidzo chekuti chinyakare 'hausi iwe, ndiwe ini' chat haina kure kure. Kunzwa kusagadzikana kana kuvharirwa muhukama hwako hazvireve hazvo kuti zvapera zvachose, asi zvinoratidza kuti chimwe chinhu chinoda kupa.
Unogona kunge wakakura kunze kana kuona kuti urikuda zvinhu zvakasiyana. Zvinogona kunge kuti warasikirwa nepfungwa yako yekuzivikanwa mushure mekuve muhukama kwenguva refu.
Chero chipi chikonzero chako, kuva nenguva yekuzvishandira ndicho chinhu chakakodzera. Kana mumwe wako achikuda, ivo vanozonzwisisa iko shanduko iwe yaunofanirwa kuita kune ramangwana riri nani, kunyangwe zvichinetsa kutarisana izvozvi.
16. Uri kunyanyisa kushandisa mari.
Kushopa inzira yekuvhara manzwiro atinawo mukati. Iwe unonzwa kufara uye kufara kana iwe ukawana chimwe chinhu chitsva, asi icho chinokurumidza kupera kusvikira iwe wawana chimwe chinhu chekutenga.
Kana kushandisa kwako kwawedzera munguva pfupi yapfuura, iwe unogona kunge usingafungire pamusoro penyaya hombe iri kuitika mukati.
Kushandisa mari hakusi kutsiva kwepamoyo. Unofanirwa kusvika pasi pezvaunoshandisa mashandiro ako woita shanduko, zvikasadaro unozongonzwa kushatirwa kana bhiri iri richiuya pakupera kwemwedzi.
17. Hausi kurarama panguva ino.
Iwe unganzwa wakanamatira uchishuvira kuti dai iwe waizoita chimwe chinhu nenzira yakasiana, kana kuti uzvibate umene iwe uchirotera muzviitiko zvokufungidzira, asi hakusati kuchikubetsera iwe kuita icho chakazara chezvino.
Tanga kuonga zviripo uye ita shanduko izvozvi izvo zvinokupa iro ramangwana raunoda. Iwe haugone kuchinja zvakapfuura, asi iwe unogona kudzidza kubva pazviri uye wozvishandisa kukukurudzira iwe kuti uvake chimwe chinhu chiri nani kwauri.
kura uye uwane hupenyu
Kufungidzira kuriko kutanga asi kunyanyobatwa mumusoro mako kunozokuita kuti usuwa zvese zvaungave uchiita zvakanakisa izvozvi.
18. Unenge wave kufungisisa.
Kana iwe usina mufaro uye uchinzwa sekunge uri kurasikirwa nechero chikamu chehupenyu hwako, maitiro echisikigo ndeekutarisa pazvinhu zvauri mukutonga kwako.
Muzviitiko zvakanyanyisa izvi zvinove zvinonyanyisa, zvichikonzera kutonyanya kunetseka.
Hapana chinhu mukunyanyisa kwakambokunakira iwe, kunyanya kana urikushandisa sechivhiringidzo kubva pamanzwiro ako chaiwo. Kana chimwe chinhu chiri kutora zvakawandisa zvepfungwa dzako, edza kutsvaga chiyero nekutenderera kutarisa kune chimwe chinhu.
Chidiki chemaonero iko shanduko yakanaka iwe yaunoda kuti urege kuenda kunetseka kwako uye uwane kujekeswa pane izvo zvinonyanya kukosha.
19. Iwe wakashata.
Vanoti imba yako iratidziro yemamiriro epfungwa dzako. Kana iwe ukaona iyo nyonganiso yakakukomberedza sekuratidzira kwekunze kwepfungwa dzako nemanzwiro, zvine musoro kuti nekugadzirisa tsvina, unozonzwa nekukurumidza sekunge une musoro wakajeka zvakare.
Kana iwe uchinge wave kushatirwa, chione sechiratidzo chekutarisa manzwiro aunoita uye ita shanduko dzakakodzera usati waremerwa.
Shanduko inogona kunetsa pakutanga, asi kazhinji ndeyekuti ive nani.
Zvinogona kuve zvakaoma kubvuma kuti iwe unofanirwa kuita shanduko kuti ubatsirwe iwe, asi kana ukangoziva zviratidzo, unogona kutanga kuita chimwe chinhu chakanaka nezvazvo.
Kubvuma kuti iwe unofanirwa kuita shanduko ndiyo nhanho yekutanga yekuzviisa iwe kunzvimbo iri nani.
Ndiwe wega une kugona kutora hupenyu hwako uye unofanirwa kuve mune yakasimba, yakanaka nzvimbo yepfungwa kuti uite izvi. Tora nguva uchiita zvinhu zvinokufadza uye kunzwa uine chivimbo mukukwanisa kwako kuita sarudzo dzakanaka.
Tora muridzi wesarudzo dzako dzehupenyu. Usasiire kune vamwe kuti vatungamire nzira yako, tora kutonga uye uve shanduko iwe yaunoda kuwona.
Unoda kuita shanduko kuhupenyu hwako asi usina chokwadi chekutangira? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
11 Akakosha Matipi Kana Iwe Uchinzwa Kuti Hupenyu Hwako Hurikuenda Kwese
Kana Iwe Uchida Kuita Chinhu Nehupenyu Hwako, Tevedza Aya matanhatu Matanho!
11 Mienzaniso YeUpenyu Chinangwa Chirevo Chaunogona Kugamuchira
Ita Zvakawanda Zvezvinhu izvi 30 Zvinhu Sezvazvinogona Kuita Kuti Hupenyu Hwako Huve Nani
Maitiro Ekuhwina Paupenyu: 10 Akanyanya Anoshanda Mazano!
Kana Iwe Uchinzwa Senge Uri Kurasa Hupenyu Hwako, Ita Izvi Zvinhu gumi
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kuda Muhupenyu: 9 Anoshanda Matipi!
zviratidzo zvekukwezva kwevanhurume munzvimbo yebasa
kuona shamwari yekare mushure menguva refu
unoziva sei kana musikana achikufarira
zvinhu zvinotorwa zvisina basa tora
zvinonakidza zvinhu zvekuita kana iwe wakasuruvara
kwenguva yakareba sei kutumira mameseji mushure mekutanga zuva